AMPI Tom Anotonov-225 MRIYA / DREAM FSX - Rikoooo
Size 26.37 MB
Downloads 59 495
Fa FSX & Steam Edition
Mpanoratra: Thomas Ruth, zanakalahin'i Mike Maarse
Modely natokana ho an'ny FSX SP1 sy SP2 tsy notanterahina tamin'ny DirectX10. Ahitana sehatra 2D fototra sy kakazo tena tsara tarehy virtoaly (jereo ny sary) ary ny feon'ilay tena An-225 ao Schiphol (Amsterdam). Ny dikan-teny roa dia misy, iray amin'ny seranan-tsambo amin'ny Air Force Sovjet Air ary ny karazana hafa "Cargo International Transport". Manana boky amin'ny teny Anglisy (fa tsy Rosiana) hamaky azy tsara, satria mahafinaritra tokoa ny mitondra fiara toy izany. Hevitra maro no mavitrika ary izany no mahatonga ilay boky torolàlana hilaza aminao ny fanalahidy rehetra.
Ny Antonov An-225 Mriya ( "nofy" ao amin'ny Okrainiana) dia fitaterana Jumbo fiaramanidina, izay vokarina any amin'ny URSS (Sovietika Repoblika Sosialista tany Ukraine) ary nahazo toy ny fehezan-dalàna anarana ho an'ny OTAN "Cossack" (An-124 dia iray amin'ireo "Condor"). Ity fiaramanidina dia ny manaitra ny habeny dia afaka ny mitondra enta-mavesatra lehibe sy mahery lavitra be.
Izany no lava indrindra sy mavesatra indrindra fiaramanidina eto amin'izao tontolo izao, fa ny faharoa eo amin'ny lafiny habeny, ao ambadiky ny goavam-be H-4 seaplane Hercules. Araka ny Anatoly Boulanenko, ny An-225 tsy mbola zatra ny rehetra mety ho vitany, ary nanaraka azy foana, ny An-225 koa dia mora raisina mpiady. Eny tokoa, nandritra ny fihetsiketsehana ny Bourget, dia nihodina teo ny zoro ny 45 ° amin'ny sovietika sambon-danitra Buran ny 62 taonina tia ny fuselage.
Antonov 72-74 fonosana FSX & P3D